बोलिवूड स्टार गोविन्दाले नेपालमा जन्मेकी सुनीतासँग बिहे गरे ? किन प्रेमिका निलमसँग बिहे गरेनन ?
हँसमुख र चक्लेटि हिरोको उपाधी पाएका गोविन्दा ५४ बर्षमा लागेका छन्।उत्कृष्ट नृत्य, गर्ने र हरेक भूमिकालाई उत्तिकै न्याय गर्न सक्ने एक कुशल अभिनेताको छवी बनाएका गोविन्दा आफ्नै संघर्षले बलिउडमा स्टार बनेका हुन्।
बिशेष गरेर कमेडियन भूमिकामा धेरै अभिनय गरेका गोविन्दाले थुप्रै हिट फिल्महरु बलिउडमा दिएका छन्।
गोविन्दा जतिबेला पनि हाँसिरहेका देखिन्छन्। उनको अनुहारमा निराशा र रिस कमै देखिन्छ।
सधैँ हसिला-रमाईला गोविन्दाले आमाको दवाबमा आफ्नी प्रेमिका अभिनेत्री निलमलाई त्याग्न परेपछि भने निराश र दुखी भएका थिए।
फिल्म निर्माता प्राणलाल मेहताको अफिसमा निलम र गोविन्दाको पहिलोपटक भेट भएको थियो। गोविन्दाले पहिलो भेटमै निलमलाई मन पराएका थिए भने निलमले भेट भएको केहि समयपछि मात्रै गोविन्दालाई आफ्नो तन-मन सुम्पेकी थिइन्।
निलम त्यतिबेलाकी अत्यन्तै राम्री नायिकाहरुमा गनिइन्थिन।गोविन्दको विहेपछि पनि निलम-गोविन्दाले थुप्रै फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका थिए।
तर,गोविन्दाकी आमाले निलम-गोविन्दाको प्रेम सम्बन्ध मन पराईनन् र काठमाडौंमा जन्मेर मुम्बईमा हुर्केकी सुनीतासँग बिहे गर्न दवाब दिइन्। सुनीता फिल्म निर्देशक आनन्द सिंहकी साली हुन्।
आफ्नी आमाको दवाबलाई गोविन्दाले नाई भन्न सकेनन् र उनले सुनितासँग बिहे गरे र बाहिरी दुँनियालाई बिहेको कुरा थाहा दिएनन् र पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्मेपछि मात्रै उनले आफु बिबाहित भएको सार्वजानिक गरेका थिए।र गोविन्दाले अन्तरबार्ताहरुमा निलमलाई भुल्न गाह्रो भएको स्वीकार्थे।
सन् १९८६ मा हिन्दी फिल्म ‘लभ ८६’ बाट गोविन्दाले बलिउडमा आफ्नो क्यारियर शुरु गरेका थिए। गोविन्दाकी छोरी ‘टिना आहुजा’ पनि बलिउडमा छिन्।
प्रकाशित मिति :२०७४ पुष ६,बिहिबार
“कान्छी” सीरियलकी आमा एक्कासी आईन मिडियामा, कन्चनको बारेमा यस्तो भनिन, १३ बर्षमा बिहे रातिमा घर आउदा यस्तोसम्म भन्थे हेर्नुहोस